(DAAWO) Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo Daah-furey shirka wadatashiga Dib-u-heshiisiinta Qaranka. – Hornafrik Media Network
Geelle iyo Farmaajo oo xariga ka wada jaray safaaradda Jabuuti
Horjooge Alshabaab ah oo la dilay
VillaSomalia oo casha sharaf u sameysay Geelle iyo wafdigiisa
Maxaay ka wada hadleen Geelle iyo Farmaajo
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo dib ugu soo laabtay Muqdisho
Wasaaradda qorsheynta oo soo bandhigtay warbixin bileedkeeda
(DAAWO) Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo Daah-furey shirka wadatashiga Dib-u-heshiisiinta Qaranka.
By admin	 On Jun 13, 2017
Ra’iisul Wasaare ku -xigeenka XFS ahna ku simaha Ra’iisul Wasaaraha Mudane Mahdi Maxamuud Guuleed ayaa si rasmi ah maanta u daah furey shirka Wadatashiga Dib-u-heshiisinta Qaran, Xog-ururinta Khilaafaadka iyo Xaalkooda kaasoo lagu qabtey Muqdisho. Waxaana ka soo qayb galey Wasiirka Wasaarada Arimaha Gudaha,Federaalka iyo dib u hushiisiinta Soomaaliya,Qaar kamid ah madaxda dalka,Xubno ka socdey Maamul Gaboleedyada,Odayaasha dhaqanka,Abwaano iyo qeybaha kala ee bulshada.
Wasiirka Wasaarada Arimaha Gudaha,Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Soomaaliya Cabdi Faarax Siciid (Juxa) ayaa sheegey in shirkan uu horudhac u yahey dib-u-heshiisiin dhab ah oo loo sameenayo shacabka Soomaaliyeed. Waxuuna tilmaamey sida loogu baahan yahey in shirkan wadatashi ey ka soo baxaan qodobo dhaxal gal u ah bulshada Soomaaliyeed, waxuuna balan qaadey iney dhaqan galinayaan go’aanada ka laga gaaro shirka.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamuud Guuleed (Khader) ayaa u mahed celiyey madaxda Wasaarada Arimaha Gudaha,maadaama wakhtii loo baahnaa ay qabteen Shirka Wadatashiga Dib-u-heshiisiinta Dalka. Waxuuna cadeeyey in wadatashigan uu qeyb ka yahey dib u soo celinta dalka maadaama uu yahey mid Qaran.
“Waxaa loo baahan yahey in la sameeyo dib-u-heshiisin Siyaasadeed iyo mid Diimeed si loo helo kalsooni shacab taasina waxaa looga baahan yahey in looga doodo sidii loo heli lahaa kulan kan inta uu socdo”ayuu Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya ayaa u soo jeediyey ka qeyb galaaysha shirka iney Dib-u-heshiisiinta Dalka gaarsiiyaan deegaanada ay matalayaan si loo abuuro shacab u diyaarasan in la helo Nabad iyo Nolol,waxuuna tilmaamey in la sameeyo madal wadatashi iney qayb ka aheyd balan qaadyadii uu sameeyey Madaxweynaha Soomaaliya xiligii doorashada.
Dowlada Federaalka wey ka go’antahay wax u qabashada Muwaadiniinteeda.
Shir Maamullada Puntland iyo Galmudug uga furmay Magaalada Gaalkacyo.
reporter	 Mar 17, 2019 0
Cawad oo qaabilay Benjamin James Fender.
Wax ka ogow Shirka ka dhacaya uganda oo Soomaaliya ka qeyb galeyso
Ganacsatada degan xeebta liido oo la dul dhigay amarro
Xarumo cusub oo loo dhagax dhigay hanaanka maaliyadda dalka
Madaxweyne Farmaajo oo ka qayb-galay xaflad lagu soo xirayay Kalfadhig 4-aad ee…
reporter	 Jan 15, 2019 0
Gabdha Soomaali ah oo la baarayo sababta dhimashadooda
Dood ka dhalatay Ciidamadii la geeyay magaalada Baydhabo.